देउसी–भैली खेल्दा बलिराजाले पठाएको भन्नुको कारण यस्तो रहेछ [थाहा पाउँदा जो कोही चकित] - E ALL NEPAL
काठमाडौ। अझ यतिसम्म भन्न भ्याएका छन् कि दानव कुलका शक्तिशाली बलिराजाले इन्द्रको स्वर्ग कब्जा गरे । कहाँ छ त्यो स्वर्ग भन्ने ठाउँ रु कसले देखेको छ स्वर्ग रु यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठाउने गरिन्छ, गाई काटेर खाने मगरले के गाईको पुजा गरे होलान् र रु पञ्चायतकालसम्म रुकुमको मैकोटमा बकाइदा गाईको बलि चढाइन्थ्यो, मगर पुजारीद्वारा । दिदीबहिनी दाजुभाइको मिलनको चाड तिहारको रमाइलो पक्ष भैलो र देउसीको नाचगान हो । भैलो तथा देउसी खेल्न युवा र केटाकेटी मात्रै होइन, प्रौढ र पाका उमेरका मान्छेहरु पनि निकै रौसिन्छन् । टोली नाइकेले लय हालेर नाटकीय शैलीले भट्टयाउने र सहभागीहरुले भैलो तथा देउसीरे घन्काउँदै सामूहिक रुपमा नाँच्ने चलन नेपालको मौलिक विशेषता हो ।
नाँच्ने क्रममा यस घरको मन ठूलो छ, दान पनि ठूलै हुन्छ, भैलोलाई मुठीखोलेर दान दिन्छन्, मिठामिठा परिकार दिन्छन्, छानामाथि घिरौला के के दिन्छन् हेरौला भन्दै खुब फुक्र्याइन्छ । त्यसै क्रममा हामी त्यसै आएका हैनौं, बलिराजाले पठाएको भन्ने गरिन्छ । साँच्चै को थिए बलि राजा रु कुन मुलुकका हुन् ? अनि के संकट पर्‍यो ? नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आपत परेको बेला सिंह दरबार छाडेर नागार्जुन बास माग्ने अवस्था जस्तै भएको थियो तिनलाई रु कुन जुगका थिए ती रु कि जहिले पनि तिनले पठाको भनेर पैसा मागिन्छ रु हरेक तिहारमा यस्ता प्रश्न सबैका मनमा उठ्नु स्वभाविक नै हो । यसको उत्तर पाउन त्यति सजिलो छैन ।
मगर राजाले स्थापना गरेको मगरको मौलिक पर्व तिहार हिन्दूहरुको मिथकस“ग जोडेर यम पञ्चक भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । अझ पछिलो समय त यतिसम्म गरिएको छ कि भैलो–भैलो भन्न छाडेर भैलीको पछाडि राम थपेर भैलीराम भन्दै भट्टयाउने गरिएको छ । फाइलो–फाइलोबाट अपभ्रंश हुँदै भैलोसम्म आइपुग्यो । यदि मगरहरुले आफ्नो इतिहासलाई नखोज्ने, अनुसन्धान, अध्ययन नगर्ने हो भने कालान्तरमा हाम्रो पूर्खाहरुले भैलीराम नै भन्नेछन् । अनि मगर राजा बलिहाङले चलाएको एउटा ऐतिहासिक पर्व तिहारलाई पूरै हिन्दूकरण गरिनेछ र भनिनेछ– मगरहरु परापूर्वकाल देखि नै हिन्दू थिए । यदि गम्भीर नहुने हो भने दास बनाउने सबैभन्दा पुरानो र अहिलेसम्म चलिरहेको अचुक यो अस्त्रबाट मगर पहिचान धुलिसात हुनेछ ।